သက်တ-ဓာတ်ပုံ Overlay ကို APK ကို Download လုပ်ပါ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဓါတ်ပုံပညာ Apps ကပ » သက်တံ့-ဓာတ်ပုံ Overlay ကို, Superimpose နှစ်ချက် Exposure
သက်တံ့-ဓာတ်ပုံ Overlay ကို, နှစ်ချက် Exposure APK ကို Superimpose
သက်တံ့သင်၏အသက်တာအချိန်လေးကိုအလှဆင်ဖို့တော်တော်လေးနေရောင်မီးတောက်နှင့်အရောင် overlay ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများယူဆောင်လာသည့် selfie ကင်မရာ & ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ App ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်နှစ်ဆထိတွေ့လိုပဲ, သက်တံ့သက်ရောက်မှုကိုပိုပြီးလူကြိုက်များလာပြီဖြစ်ကြောင်း [ပင်မထူးခြားချက်များ] 20 + ချိုမြိန်အရောင် filter များ။ ,
80 + သက်တ Overlay ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှု & အလင်းယိုစိမ့်
80 + Sun ကအိုးပေါကျကှဲ, Bokeh အလင်း, အရိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု
- ရာထူးအမည် Toning ၏6ကြင်နာမှု
- Transparency Adjust, အရွယ်အစားပြောင်းပါ,
Selfies များအတွက် real-အချိန်ကို Preview
- အခမဲ့ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် Update ကိုဃသိမ်းဆည်းထားပါ
- high-definition ရုပ်ပုံထိန်းသိမ်းရေး
superimposed လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူပေါင်းစည်း, သငျသညျသဘာဝ lomography နှင့် Vignette အကျိုးသက်ရောက်မှု, မှော်သက်တံ့ filter များ, ပျော့ & ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေစတိုင်, အေးမြ & အနုပညာကို double ထိတွေ့မှုပင်အထူးရုပ်ရှင် & retro စတိုင်ကဲ့သို့သင်၏ပုံရိပ်တွေများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ camera app ထဲမှာပိုများသော selfie သက်ရောက်မှုသင့်ရဲ့ရှာဖွေရေးဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်! ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုထက်အများကြီးပိုကောင်းပြုလိမ့်မည်အနာဂတ်၌ယုံကြည်!
ကျနော်တို့သက်တံ့ရောင်ဓာတ်ပုံကိုအယ်ဒီတာကိုသုံးပါနှင့်အဆက်မပြတ် functions တွေ update လုပ်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမည်! ကျနော်တို့တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, စတစ်ကာနှင့် filter အကြောင်းသင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုမျှော်လင့်နေကြသည်။ နှင့်သင့်5ကြယ် ratings အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မာနထောင်လွှားများမှာ!
ဒါဟာအလွန်ကိုသင် tag ကို # Rainbowapp နှင့်အတူ Instagram ကိုဓါတ်ပုံများကိုမျှဝေကြောင်းတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်!
ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသည်, သက်တံ့ရောင် app ကိုအသုံးပြု Thank you!
Facebook မှာ: @rainbowapp
သက်တံ့ရောင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမဆိုအဆင်မပြေသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နိုင်ပြီး, ငါတို့သည်သင်တို့တုံ့ပြန်ချက်ပေးသည့်အခါသက်တ app ကိုမွမ်းမံသူတို့ကိုရည်ညွှန်းပါလိမ့်မယ်။
- ဘာဂ် fixed
သက်တံ့-ဓာတ်ပုံ Overlay ကို, Superimpose နှစ်ချက် Exposure
8.28 ကို MB
WecutCentury Inc က